England 1-1 Russia: Gool Uu Waqtigii Dhimashada Dhaliyay Berezutski Oo Qalbi Jabiyay Jamaahiirta Three Lions Iyo Inkaartooda Furitaanka Euro Oo Weli Socota. | Haqabtire News
England 1-1 Russia: Gool Uu Waqtigii Dhimashada Dhaliyay Berezutski Oo Qalbi Jabiyay Jamaahiirta Three Lions Iyo Inkaartooda Furitaanka Euro Oo Weli Socota.
Guul u dhaliyay waqtigii dhimashada Berezutski ayaa England ka beenisay inay markii ugu horeysay abid badiyaan kulankooda ugu horeeya ee tartamada qaramada Yurub iyadoo goolkaas uu kansalay gool laad xor ahaa uu hogaanka ugu dhiibay xulka England Eric Dier taasoo keentay inay ciyaarta ku soo dhamaato barbaro 1-1 ah.
Tababare Roy Hodgson ayaa ku soo shirtagay shax la saadaalinayay isagoo weerarka ku soo bilaabay Harry Kane halka kabtanka kooxda Wayne Rooney uu ka ciyaarayay khadka dhexe iyadoo shan ciyaaryahan oo Tottenham ah ay ku soo bilowdeen shaxda xulka Three Lions. Waana shaxdii ugu da’da yareyd ee ay England ku soo shirtagto kulan tartan weyn ah tan iyo 1958dii.
Xulka England ayaana ciyaar fiicneyd qeybtii hore laakiin waa ay ka faa’ideysan waayeen fursadihii ay heleen iyadoo xulka Ruushka ay badbaadeen ilaa iyo waqtigii nasahsada. Three Lions ayaana helay fursado dhowr ah iyadoo goolhaye Akinfeev uu laf dhuun gashay ku noqday.
Tababaraha Arsenal Arsene Wenger ayaa ku sugnaa garoonka Marseille oo daawanayay kulankii caawa.
Fursad uu helay Lallana bartamihii qeybta hore ayaa aheyd fursadii ugu fiicneyd ee xulka England soo martay ka dib markii ay si fiican jaanta iskula heleen Kyle Walker, halkii laga filanayay inuu kubada shabaqa cusjiyo waa uu hareer mariyay.
England ayaa sagaal darbo ku heshay Russia qeybtii hore waana darbooyinkoodii ugu badnaa ee qeybta hore ee ciyaar ka tirsan qaramada Yurub tan iyo kulankii Croatia ee sannadii 2004 markaasoo ay 11 darbo ku heleen. Waxaana qeybtii hore lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Halistii ugu horeysay ee qeybtii labaad waxaa abuurtay xulka Ruushka iyadoo Kokorin uu boos iican ka helay geeska midig ee xerada goolka, waxaana uu soo dhigay karoos hoos oo halis ah laakiin Cahill ayaa kubada bixiyay oo badbaadiyay.
Russia ayaa sidoo kale koornooyin isku xig xiga helay iyadoo mid ka mid ah koornooyinkaas daqiiqadii 60aad uu halis isgeliyay Dier markii uu u madaxeeyay kubada dhanka goolkiisa laakiin waxaa faraha cidooda ku sii bixiyay goolhaye Joe Hart.
Daqiiqadii 63aad ayy Russia mar kale fursad abuuratay inkastoo England ay kubada heysata, kubad la soo qaaday ayaa waxaa madax ku dhigay Dzyuba iyadoo uu helay Smolov kaasoo ka darbeeyay kubada meel 25 yard u jirta goolka waxaana ay si ciriiri ah ku hareermartay goolkii uu waardiyaha ka ahaa Joe Hart
Daqiiqadii 71aad waxaa England soo martay fursad gool loo fishay laakiin mar kale Akinfeev ayaa u diiday inay dhalato. Raheem Sterling ayaa karoos ka soo dhigay garab bidix, waxaa kubada damcay inuu bixiyo mid ka mid ah xiddigaha Ruushka laakiin waxa ay kubada lugta u gashay Wayne Rooney oo taagnaa afka hore ee xerada goolka kaasoo darbo xoogan oo dhulka ku socoto ku tuuray goolka, Akinfeeva ayaana si fantastik ah kubada gacanta ugu taabtay ka hor inta aysan birta kore ku dhicin. Lallana oo isna hortaagnaa goolka ayaa ku celiyay waxaana ay ku dhacday mar kale birta laakiin Lallana offside ayuu ahaa.
DAQIIQADII 73aad GOOOL!!! Labo daqiiqadood ka dib fursadaas, England ayaa laad xor ah loo dhigay afka hore ee xerada ganaaxa ka dib markii Schennikov uu qalad ku galay Della Alli. Eric Dier ayaana laadka xorta ah u istaagay isagoo si habsami leh u dhex dhigay shabaqa islamarkaana hogaanka u dhiibay xulka Three Lions.
DAQIIQADII 90+2 GOOOL!!! Ma aamini kartaa waqtigii dhimashada ayuu Ruushka niyadjabiyay jamaahiirta Three Lions markii kubad la soo qaaday uu madax ku taabtay Berezutski iyadoo ay dhaaftay xariiqda goosha ka hor inta uusan Gluskakov xaqiijin inay kubada shabaqa ku jirto.
Waxaana ay ciyaarta ku soo idlaatay barbaro 1-1 ah iyadoo England ay ka qoomameyn doonaan fursadihii ay iska qasaariyeen, waxaana weli daba socota inkaarta ah inaysan waligood guul ku bilaabanin tartanka qaramada Yurub. Group B waxaa haatan seddex dhibcood ku hogaamineysa Wales halka England iyo Russia ay min dhibic leeyihiin, waxaana ugu hooseysa Slovakia oo laga badiyay maanta.